Date My Pet » Ahoana no Hatramin'izao ny Zazavavy Kely Iray Iza Mampiseho Little Fitiavana
Last nohavaozina: Mey. 26 2020 | 2 min namaky
Raha miaraka ny ankizivavy kely izay mampiseho fitiavana dia mety halaim-panahy mba hanipy any amin'ny servieta. Mety ho ny olona mba hanomboka ara-batana foana fifandraisana toy ny mamihina, cuddling, na MIFANOROKA. Raha izy mora mandray ny mampiseho ny fitiavana, dia toa tsy mahazo aina natombony ho azy ireo fihetsika manokana. Raha efa hita izao avy amin'ny daty ary mampahatahotra anao, hanao zavatra ankehitriny, mba tsy ilaina fihenjanana eo amin'ny fifandraisanareo.
Mamaritra ny Fihetseham-po
Zava-dehibe ny mahatakatra fa ny olon-tiany tsy afaka mamaky ny saina sy ny tsy mety ny fitondran-tena hoe ahoana no mahakasika anao. Fifandraisana manam-pahaizana, Dr. Karen Sherman dia manamafy fa zava-dehibe ny milaza ny olon-tiany ny fihetseham-ponao. Angamba, ny fitondran-tena unaffectionate nandao anao hahatsapa ho nanda, lavitra azy, kivy, na dia tsy ilaina. Na inona na inona no, misintona azy manokana ho an'ny fifanakalozan-kevitra lehibe peo ny vokatr'izany eo aminao ny zavatra nataony.
Rehefa avy nitondra ny fanentanana ny inona no tsy anao, tonga ny fotoana mba handalina. Mametraha fanontaniana mba hanampy hamantatra ny antony mahatonga ny sipa ny fitondran-tena. Mety ho ao amin'ny fifandraisana teo aloha ny daty izay tsy mitaky be dia be ny fitiavana. Ankoatra izany, raha ny fifandraisanareo dia mbola somary vaovao, dia mety mila fotoana bebe kokoa mba hanafanana ho anao sy ny fitakian 'ny fifandraisana. Raha vao ireo roa efa pinpointed antony azo atao ho an'ny tsy-pitiavana, fomba Avoahy ny samy afaka manana ny zavatra ilaina nihaona.
Mijanòna Ho Ianao Ihany
Tsarovy, tokony maneho fihetseham-po ny olon-tiany amin 'ny fomba izay tonga ho azy aminao, izy na dia tsy hanimba azy ireo. Tao amin'ny lahatsoratra "10 Toetra mampiavaka ny Todika Ny fitiavana ny olona", Dr. Kory Floyd ny lisitry ny tombontsoa maro ny Maneho Fitiavana ambony toy ny manana tena misy vidiny, tsy tahotra ny fifandraisana akaiky, ary lehibe ny faharetantsika amin'ny adin-tsaina. Ankoatra izany, mpikaroka Andrew Gulledge, Michelle Gulledge, ary Robert Stahmann nampiseho fa ny fifandraisana ara-batana fitiavana mitombo fahafaham-po ho an'ny mpiara-miasa. Na dia teo aza ny olon-tiany ny tsy fitiavana, anao manokana fisokafana mba haneho fitiavana mba hahabetsaka ny mponina dia mamela anao ireny vokatra tsara ary manana fomba fifandraisana amin'ny ho avy.
Ataovy ny Mafy Fanapahan-kevitra
Mety ho tonga amin'ny teboka iray rehefa mahatsapa fa, na dia eo aza ny ezaka tsara indrindra olon-tiany ny, ianao mbola tsy afa-po eo amin'ny fifandraisana. Dr. Sherman fa lafin-javatra manan-danja eo amin'ny fifandraisana rehetra ny fianarana ny hafa hanaiky ny fahasamihafana. Raha hitanao fa tsy ny olon-tiany-pitiavana ny mbola manahirana anareo, dia mety ho tsara indrindra mba hamarana ny fifandraisana amim-pitiavana, ary hitady olona iray izay afaka manatanteraka ny mila fitiavana.
5 Unique fahavaratra Date Hevitra
Volana Amin'ny Online Dating Profile Photo